Maxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Aqalka Sare & Madaxweynaha Jubbaland? – Banaadir Times
Maxay ka wada hadleen Guddoomiyaha Aqalka Sare & Madaxweynaha Jubbaland?
By banaadir 27th June 2021 40 No comment
Guddoomiyaha Golaha Aqalka Sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdillaahi ayaa waxaa uu Maanta kulan la qaatay Madaxweynaha dowlad Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ku suganMagaalada muqdisho.
Labada mas’uul ayaa waxaa ay ka wada hadleen sidii loo dardar galin lahaa dadaalada loogu jiro qabsoomida Doorashooyinka Baarlamaanka iyo iyo tan Madaxweynaha.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ayaa uga mahad celiyay Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam dadaalada uu gelinayo sidii dalkaan uga dhici laheyd dooraso oo dhan yahay.
Madaxweynaha Goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo Muqdisho u yimid ka qyeb galka kulanka Golaha wadatashiga doorashooyinka ayaa waxaa la filaya I uu la kulmay Madaxda kale ee dowlad Goboleedyada.
Puntland oo saaka dil toogasho ku fulisay 21 Rag ah
Caqabado heysta qabsoomida Shirka Golaha wadatashiga doorashooyinka
Dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay u diyaar garoowday sugida Amniga doorashada
Xukuumadda oo faah faahisay kulankii Gollaha Wadatashiga Qaran & Beesha Caalamka
By banaadir 29th May 2021
Madaxweyne Deni oo Maanta furaya Kalfadhiga 48aad Ee Golaha Wakiillada Puntland
By banaadir 15th June 2021